“မတ်စောက်သော ချောက် ပေ၁၇၀၀ ခန့််မှာတွေ့ရသော မစိမ့်ထက်ရဲ့ အပေါ်အကျီင်္ကို ဆင်းယူခဲ့သူရဲ့ ပြောပြချက်” – ရှအေလငျး
“မတ်စောက်သော ချောက် ပေ၁၇၀၀ ခန့််မှာတွေ့ရသော မစိမ့်ထက်ရဲ့ အပေါ်အကျီင်္ကို ဆင်းယူခဲ့သူရဲ့ ပြောပြချက်”
ဖန်ဂရန် ရာဇီ ရေခဲတောင်ထိပ်ပေါ်ကနေမတော်တဆပြုတ်ကျပျောက်ဆုံးနေသော မစိမ့်ထက်အားရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ ပထမအကြိမ်ရှာဖွေခဲ့ခြင်းပေါ်အင်တာဗျူး
မေ ၁၃ ရက်
ပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကြန်မတိုင်မီ ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့ကThe Summiter လို့ခေါ်တဲ့အပျော်တမ်းခြေလျင်တောင်တက်အဖွဲ့ဟာလူအင်အား (၂၀) နဲ့အတူ ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျား ပူတာအိုမြို့နယ် ဖန်ဂရန် ရာဇီရေခဲတောင်ထိပ်ကနေပြန်အဆင်းမှာ မနက် ဝ၉:၃၀ ချိန်ခန့်မှာ မစိမ့်ထက်ဟာ မတော်တဆခြေချော်ကျပြီး ပျောက်ဆုံးနေမှုဟာ ယခုဆိုလျင် (၁) လပြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည် ၊ ပျောက်ဆုံးမှုအပြီး နယ်မြေကျွမ်းကြသည့်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများကို ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဆပ်မကော်မတီအဖြစ်ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ပေးပြီး ဧပြီလ (၂၆) ရက်နေ့မှစ၍ ပူတာအိုမြို့မှစတင်ထွက်ခွာခဲ့ကြပြီး ဖန်ဂရန် ရာဇီရေခဲတောင်ထိပ်သို့ အဖွဲ့ဝင် ( ၁၅ ) ဦးမှသွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ကြသည့်အထဲမှ ရဝမ်တိုင်းရင်းသား ” ဆန်လုရမ်ဆိန်း ” ကို ကျွန်တော်မှဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါသည် .
မင်္ဂလာပါကိုဆန်လုရမ်ဆိန်းခင်ဗျာ ၊ ကျွန်တော်ကိုစည်သူမောင်ပါဗျ ၊ ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားတစ်ဦးပါ ၊ အကိုတို့ရေခဲတောင်ပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ တစ်လခန်ဲ့ကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ” မစိမ့်ထက် ” ကိုသွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်လို့လို့သိရပါတယ် ၊ ဘယ်နေ့ကစပြီးသွားရောက်ခဲ့ကြတာလဲ ? ၊ အဖွဲ့ဝင်ဘယ်နှစ်ဦးနဲ့ဘယ်လိုတွေရှာဖွေခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ကျေးဇူးပြု၍ပြောပြပေးပါလားဗျာ
ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျ ၊ ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ (၂၆) ရက်နေ့ကပူတာမြို့ကနေ (၁၅) ယောက်နဲ့စထွက်ပါတယ် ၊ ဖန်ဂရန်ရာဇီ တောင်ထိပ်ကို ရောက်ဘို့ခြေလျင်ခရီး ၈ ရက်ကြာပါတယ် ၊ ရန်ကုန်ကတောင်တက်အသင်း (၉) ယောက်ပါပါတယ် ၊ မစိမ့်ထက်တို့သွားတုန်းက လမ်းပြအဖြစ်လိုက်သွားတဲ့ “ဆန်ဂေါင်ရွာ ” ကဒေသခံရဝမ်တိုင်းရင်းသား ” ဆင်ချန်းဇိန် ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပြန်လိုက်လာပါတယ် ၊ သူကအတိအကျသိတယ် ၊ မစိမ့်ထက်ဘယ်နေရာကျသွားသလဲဆိုတာ သူတို့ပြောတဲ့အပိုင်းအစတစ်ခုတွေ့တယ်ဆိုတာ ၊ ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားချိန် အပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်တာမသဲကွဲဘူး ၊ ရာသီဥတုကြောင့်သဲသဲကွဲမသိရပါဘူး ၊ အမြင့်ပေအနက် ၁၇၀၀/၁၈၀၀ လောက်မြင့်တာဆိုတော့ ဘာမှန်မသေချာဘူး
အဲ့ဒီတော့ အကိုတို့အဖွဲ့ဆင်းကြည့်ကြသလားဗျ ? ၊ ဘယ်သူတွေပါသေးသလဲ ?
အင်း …ကျွန်တော်တို့ချောက်ကမ်းပါးပေါ်ကနေဆင်းတဲ့အဖွဲ့က ဦးလန်ဝန်ထ်ိန်ရယ် ၊ ဆင်ချန်းဇိန်ရယ် ကျွန်တော်ရယ်ပါ ကြိုးနဲ့ဆင်းကြည့်တယ် ၊ ကျန်တဲ့၃ ယောက် အပေါ်ကနေကြိုးတွေကိုတောင့်ထားပေးပါရတယ်..
အကိုပြောတော့ ၁၅ ယောက်သွားကြတယ်လို့ပြောတော့ ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေက ဘယ်မှာကျန်ခဲ့သလဲဗျ ?
ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေက ရန်ကုန်တောင်တက်အသင်းကလို့သိရတယ် ၊ ရေခဲစပ်တောင်ခြေလာရင်းလမ်းမှာ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြီး ချောင်းရေကြီးတော့ သူတို့ကိုမကူးခိုင်းဘဲနဲ့တောင်ခြေမှာဘဲထားခဲ့ရတယ် ၊ နယ်မြေကျွမ်းကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ (၆)ယောက်အဖွဲနဲ့ဘဲတက်သွားကြတာပါ
အဲ့တော့ ..အဲ့ဒီလောက်နက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးတွေနဲ့ဆင်းကြည့်လိုက်တော့ အပေါ်က ပထမတွေ့ကြတဲ့အပိုင်းအစတွေကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့်လူခန္ဓာရုပ်အစိတ်အပိုင်းအစတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ သူဝတ်ထားတဲ့အပေါ်အင်္ကျိဖြစ်နေတယ် ၊ ဂျာကင်အင်္ကျိပေါ့ ၊ မိုးကာအင်္ကျံဖြစ်နေတယ် ၊ အဲ့ဒါနဲ့ ၁၅ ပေအကွာမှာမျက်မှန်အစုတ်တစ်လက်ထပ်တွေ့တယ် ၊ ကျန်တဲ့အသုံးအဆောင်တွေ အလှဆီဗူးတွေလည်း တွေ့ခဲ့ရတယ် ။
ဟုတ်ကဲ့ အကို့အနေနဲ့မစိမ့်ထက်ဟာ နောက်ထပ် ဘယ်လောက်အနက်အထိရောက်သွားနိုင်သလဲ ? ပြီးတော့ ဒီအဝတ်အစားတွေ ၊ အီကွေ့မင့်တွေကဘာလို့ ကျွတ်ကျန်ခဲ့တာလဲဆိုတာ သုံးသပ်ပေးပါအုံး ၊ ပြီးတော့ ဒီအပိုင်းအစတွေကို မစိမ့်ထက်တို့ရဲ့တောင်တက်အဖွဲ့ကဘာ့ကြောင့်မရှာနိုင်ကြသလဲဗျ ?
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရသလောက်တော့ ခေါင်းဆောင်ဟာကြိုးတွေကိုအလုံအလောက်မယူလာကြဘူးလို့သိရပါတယ် ၊ ပြီးတော့ တောင်ထိပ်ကနေပြန်အဆင်းမှာ ဒီလောက်အန္တရာယ်ကြီးလိမ့်မယ်လို့ သူတို့ထင်မထားကြပုံရတယ်ဗျ..
ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ခေါင်းဆောင်ရဲ့ပေါ့ဆမှုလဲပါတာပေါ့ ၊ သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ ယုံကြည်မှုလွန်ကဲသွားတာပါ..
အဲ့လိုကနေ မတော်တဆဖြစ်စဉ်မှာ အရှိန်နဲ့ချောက်ထဲကိုလျှောကျသွားတဲ့အခါ မမြင်နိုင်တဲ့ ကျောက်ချွန်း ကျောက်ဆောင်ငယ်တွေနဲ့တိုက်မိ ချိတ်မိပြီးဆွဲချွတ်မိသလိုမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..
ဟုတ်ပါတယ် ပထမအပိုင်းအစတွေက ပေ၁၇၀၀ ခန့််မှာတွေ့တာဆိုတော့ အဲ့ဒီချောက်ကမ်းပါးက အရမ်းမတ်စောက်တယ် ၊ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဆက်ပြီး ဆင်းဘို့ဆိုအရမ်းလည်း အန္တရာယ်အရမ်းများတယ် ၊ နောက်ပြီး ပါလာတဲ့ကြိုးတွေကမမှီတော့ဘူး ၊ ကြိုးခွေအားလုံးဆက်မှ ပေ ၂၀၀၀ လောက်ပဲရှိတော့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး ၊ ရာသီဥတုကိုလည်းအကဲခတ်ရပါတယ်..အချိန်မရွေးရာသီဥတုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိပါတယ်..
အကိုတို့အဖွဲ့ဖန်ဂရန်ရာဇီ တောင်ထိပ်ကိုဘယ်နေ့ရောက်တာလဲဗျ ?
မေလ (၄) ရက်နေ့မနက်စောစောမှာ ဝင်းတင်ကုန်း ( ဝန်တင်ကုန်း ) ကနေစထွက်တယ် ၊ ၂ နာရီလောက်ဘဲတက်ရပါတယ် ၊ တောင်ထိပ်ကို ၉ နာရီလောက်ရောက်ပါတယ် ၊ ရောက်တာနဲ့ရှာဖွေမှုကိုစတင်ပါတယ် ၊ ရှာဖွေရေးဟာ ညနေ ၃ နာရီအထိကြာသွားပါတယ် ၊ အဲ့ဒီကနေတောက်လျှောက် ရေခဲစပ်အထိဆင်လာတာ ၊ ပူတာအိုကိုမေလ (၈) ရက်နေ့ပြန်ရောက်ပါတယ် အဆင်းကတော့မြန်တာပေါ့ ၊
ဟုတ်ကဲ့….အကိုရေ အကယ်၍များအကိုတို့ဒေသမှာရှိတဲ့ရေခဲတောင်တွေကို ခရီးသွားတွေအနေနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ခြေလျင်တောင်တက်အသင်းတွေဘဲဖြစ်ဖြစ် အပျော်တမ်းတောင်တက်အဖွဲ့တွေဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့.. လာမယ်ဆိုရင်ဘာတွေဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေလိုအပ်ပါသလဲ ? ဘယ်လတွေမှာလာသင့်သလဲဗျ ?
အဓိက ကျမ္မာရေးကောင်းရမယ် ၊ တောင်တက်ခြင်းလက်တွေ့တွေကိုလေ့ကျင့်သားပြည့်ဝပြီးသားဖြစ်နေရပါမယ် လိုအပ်တဲ့အီကွေ့မင့်တွေလည်းစုံစုံလင်လင်ပါရမယ် ၊ လမ်းခရီးမှာဒေသခံတွေပြောပြတဲ့စည်းကမ်းတွေ ၊ တားမြစ်ချက်တွေကိုလိုက်နာရပါမယ် ၊ တောင်ထိပ်ရောက်ရင်
တောင်ထိပ်မှာ အညစ်ကြေးတစ်ခုခု မြှုပ်နှံ့ တာတွေ ရုပ်ထု မြုပ်တာတွေ တောင်ကို အောင် နိုင်ကြောင်း အောင်ပွဲခံတာတို့
သီချင်းဆို တာတွေ ကို ရှောင်ရပါမယ်..,.
ဟု ရေခဲတောင်ပေါင်းအလုံး (၁၀၀) ခန့်တက်လာခဲ့ဖူးတဲ့အသက် (၂၇) နှစ်အရွယ် ဒေသခံရဝမ်တိုင်းရင်းသား ဆန်လုရမ်ဆိန်းကအထက်ပါအတိုင်းဖြေကြားသွာပါသည် ။
Crd : စည်သူမောင်
ဖနျဂရနျ ရာဇီ ရခေဲတောငျထိပျပျေါကနမေတျောတဆပွုတျကပြောကျဆုံးနသေော မစိမျ့ထကျအားရှာဖှေ ကယျဆယျရေးအဖှဲ့မှ ပထမအကွိမျရှာဖှခေဲ့ခွငျးပျေါအငျတာဗြူး
မေ ၁၃ ရကျ
ပွီးခဲ့တဲ့သွင်ျကနျမတိုငျမီ ဧပွီလ ၁၂ ရကျနကေ့The Summiter လို့ချေါတဲ့အပြျောတမျးခွလေငျြတောငျတကျအဖှဲ့ဟာလူအငျအား (၂၀) နဲ့အတူ ကခငျြပွညျနယျမွောကျဖြား ပူတာအိုမွို့နယျ ဖနျဂရနျ ရာဇီရခေဲတောငျထိပျကနပွေနျအဆငျးမှာ မနကျ ဝ၉:၃၀ ခြိနျခနျ့မှာ မစိမျ့ထကျဟာ မတျောတဆခွခြေျောကပြွီး ပြောကျဆုံးနမှေုဟာ ယခုဆိုလငျြ (၁) လပွညျ့ခဲ့ပွီးဖွဈပါသညျ ၊ ပြောကျဆုံးမှုအပွီး နယျမွကြှေမျးကွသညျ့ဒသေခံတိုငျးရငျးသားမြားကို ရှာဖှကေယျဆယျရေးဆပျမကျောမတီအဖွဈဖှဲ့စညျးသတျမှတျပေးပွီး ဧပွီလ (၂၆) ရကျနမှေ့စ၍ ပူတာအိုမွို့မှစတငျထှကျခှာခဲ့ကွပွီး ဖနျဂရနျ ရာဇီရခေဲတောငျထိပျသို့ အဖှဲ့ဝငျ ( ၁၅ ) ဦးမှသှားရောကျရှာဖှခေဲ့ကွသညျ့အထဲမှ ရဝမျတိုငျးရငျးသား ” ဆနျလုရမျဆိနျး ” ကို ကြှနျတျောမှဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့ပါသညျ .
မင်ျဂလာပါကိုဆနျလုရမျဆိနျးခငျဗြာ ၊ ကြှနျတျောကိုစညျသူမောငျပါဗြ ၊ ပွညျသူပွညျသားသတငျးသမားတဈဦးပါ ၊ အကိုတို့ရခေဲတောငျပျေါမှာပွီးခဲ့တဲ့ တဈလခနျဲ့ကပြောကျဆုံးသှားတဲ့ ” မစိမျ့ထကျ ” ကိုသှားရောကျရှာဖှခေဲ့ကွတယျလို့လို့သိရပါတယျ ၊ ဘယျနကေ့စပွီးသှားရောကျခဲ့ကွတာလဲ ? ၊ အဖှဲ့ဝငျဘယျနှဈဦးနဲ့ဘယျလိုတှရှောဖှခေဲ့ကွတယျဆိုတာ ကြေးဇူးပွု၍ပွောပွပေးပါလားဗြာ
ဟုတျကဲ့မင်ျဂလာပါဗြ ၊ ကြှနျတျောတို့ပွီးခဲ့တဲ့ ဧပွီလ (၂၆) ရကျနကေ့ပူတာမွို့ကနေ (၁၅) ယောကျနဲ့စထှကျပါတယျ ၊ ဖနျဂရနျရာဇီ တောငျထိပျကို ရောကျဘို့ခွလေငျြခရီး ၈ ရကျကွာပါတယျ ၊ ရနျကုနျကတောငျတကျအသငျး (၉) ယောကျပါပါတယျ ၊ မစိမျ့ထကျတို့သှားတုနျးက လမျးပွအဖွဈလိုကျသှားတဲ့ “ဆနျဂေါငျရှာ ” ကဒသေခံရဝမျတိုငျးရငျးသား ” ဆငျခနျြးဇိနျ ကကြှနျတျောတို့နဲ့အတူပွနျလိုကျလာပါတယျ ၊ သူကအတိအကသြိတယျ ၊ မစိမျ့ထကျဘယျနရောကသြှားသလဲဆိုတာ သူတို့ပွောတဲ့အပိုငျးအစတဈခုတှတေ့ယျဆိုတာ ၊ ကြှနျတျောတို့ရောကျသှားခြိနျ အပျေါကနလှေမျးကွညျ့တာမသဲကှဲဘူး ၊ ရာသီဥတုကွောငျ့သဲသဲကှဲမသိရပါဘူး ၊ အမွငျ့ပအေနကျ ၁၇၀၀/၁၈၀၀ လောကျမွငျ့တာဆိုတော့ ဘာမှနျမသခြောဘူး
အဲ့ဒီတော့ အကိုတို့အဖှဲ့ဆငျးကွညျ့ကွသလားဗြ ? ၊ ဘယျသူတှပေါသေးသလဲ ?
အငျး …ကြှနျတျောတို့ခြောကျကမျးပါးပျေါကနဆေငျးတဲ့အဖှဲ့က ဦးလနျဝနျထိနျရယျ ၊ ဆငျခနျြးဇိနျရယျ ကြှနျတျောရယျပါ ကွိုးနဲ့ဆငျးကွညျ့တယျ ၊ ကနျြတဲ့၃ ယောကျ အပျေါကနကွေိုးတှကေိုတောငျ့ထားပေးပါရတယျ..
အကိုပွောတော့ ၁၅ ယောကျသှားကွတယျလို့ပွောတော့ ကနျြတဲ့အဖှဲ့တှကေ ဘယျမှာကနျြခဲ့သလဲဗြ ?
ကနျြတဲ့အဖှဲ့တှကေ ရနျကုနျတောငျတကျအသငျးကလို့သိရတယျ ၊ ရခေဲစပျတောငျခွလောရငျးလမျးမှာ ရာသီဥတုဖောကျပွနျပွီး ခြောငျးရကွေီးတော့ သူတို့ကိုမကူးခိုငျးဘဲနဲ့တောငျခွမှောဘဲထားခဲ့ရတယျ ၊ နယျမွကြှေမျးကငျြတဲ့ကြှနျတျောတို့ (၆)ယောကျအဖှဲနဲ့ဘဲတကျသှားကွတာပါ
အဲ့တော့ ..အဲ့ဒီလောကျနကျတဲ့နရောကိုကြှနျတျောတို့ကွိုးတှနေဲ့ဆငျးကွညျ့လိုကျတော့ အပျေါက ပထမတှကွေ့တဲ့အပိုငျးအစတှကေိုတှခေဲ့ပါတယျ ၊ ဒါပမေယျ့လူခန်ဓာရုပျအစိတျအပိုငျးအစတှမေဟုတျဘဲနဲ့ သူဝတျထားတဲ့အပျေါအင်ျကြိဖွဈနတေယျ ၊ ဂြာကငျအင်ျကြိပေါ့ ၊ မိုးကာအကငြ်္ံဖွဈနတေယျ ၊ အဲ့ဒါနဲ့ ၁၅ ပအေကှာမှာမကျြမှနျအစုတျတဈလကျထပျတှတေ့ယျ ၊ ကနျြတဲ့အသုံးအဆောငျတှေ အလှဆီဗူးတှလေညျး တှခေဲ့ရတယျ ။
ဟုတျကဲ့ အကို့အနနေဲ့မစိမျ့ထကျဟာ နောကျထပျ ဘယျလောကျအနကျအထိရောကျသှားနိုငျသလဲ ? ပွီးတော့ ဒီအဝတျအစားတှေ ၊ အီကှမေ့ငျ့တှကေဘာလို့ ကြှတျကနျြခဲ့တာလဲဆိုတာ သုံးသပျပေးပါအုံး ၊ ပွီးတော့ ဒီအပိုငျးအစတှကေို မစိမျ့ထကျတို့ရဲ့တောငျတကျအဖှဲ့ကဘာ့ကွောငျ့မရှာနိုငျကွသလဲဗြ ?
ဟုတျကဲ့ကြှနျတျောတို့ကွားသိရသလောကျတော့ ခေါငျးဆောငျဟာကွိုးတှကေိုအလုံအလောကျမယူလာကွဘူးလို့သိရပါတယျ ၊ ပွီးတော့ တောငျထိပျကနပွေနျအဆငျးမှာ ဒီလောကျအန်တရာယျကွီးလိမျ့မယျလို့ သူတို့ထငျမထားကွပုံရတယျဗြ..
ပွောမယျဆိုရငျတော့ ခေါငျးဆောငျရဲ့ပေါ့ဆမှုလဲပါတာပေါ့ ၊ သူတို့ကသူတို့ကိုယျသူတို့ ယုံကွညျမှုလှနျကဲသှားတာပါ..
အဲ့လိုကနေ မတျောတဆဖွဈစဉျမှာ အရှိနျနဲ့ခြောကျထဲကိုလြှောကသြှားတဲ့အခါ မမွငျနိုငျတဲ့ ကြောကျခြှနျး ကြောကျဆောငျငယျတှနေဲ့တိုကျမိ ခြိတျမိပွီးဆှဲခြှတျမိသလိုမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ..
ဟုတျပါတယျ ပထမအပိုငျးအစတှကေ ပေ၁၇၀၀ ခနျ့မှာတှတေ့ာဆိုတော့ အဲ့ဒီခြောကျကမျးပါးက အရမျးမတျစောကျတယျ ၊ ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့ဆကျပွီး ဆငျးဘို့ဆိုအရမျးလညျး အန်တရာယျအရမျးမြားတယျ ၊ နောကျပွီး ပါလာတဲ့ကွိုးတှကေမမှီတော့ဘူး ၊ ကွိုးခှအေားလုံးဆကျမှ ပေ ၂၀၀၀ လောကျပဲရှိတော့ ဘယျလိုမှမဖွဈနိုငျဘူး ၊ ရာသီဥတုကိုလညျးအကဲခတျရပါတယျ..အခြိနျမရှေးရာသီဥတုပွောငျးလဲနိုငျတဲ့အခွအေနမြေိုးမှာရှိပါတယျ..
အကိုတို့အဖှဲ့ဖနျဂရနျရာဇီ တောငျထိပျကိုဘယျနရေ့ောကျတာလဲဗြ ?
မလေ (၄) ရကျနမေ့နကျစောစောမှာ ဝငျးတငျကုနျး ( ဝနျတငျကုနျး ) ကနစေထှကျတယျ ၊ ၂ နာရီလောကျဘဲတကျရပါတယျ ၊ တောငျထိပျကို ၉ နာရီလောကျရောကျပါတယျ ၊ ရောကျတာနဲ့ရှာဖှမှေုကိုစတငျပါတယျ ၊ ရှာဖှရေေးဟာ ညနေ ၃ နာရီအထိကွာသှားပါတယျ ၊ အဲ့ဒီကနတေောကျလြှောကျ ရခေဲစပျအထိဆငျလာတာ ၊ ပူတာအိုကိုမလေ (၈) ရကျနပွေ့နျရောကျပါတယျ အဆငျးကတော့မွနျတာပေါ့ ၊
ဟုတျကဲ့….အကိုရေ အကယျ၍မြားအကိုတို့ဒသေမှာရှိတဲ့ရခေဲတောငျတှကေို ခရီးသှားတှအေနနေဲ့ဘဲဖွဈဖွဈ ခွလေငျြတောငျတကျအသငျးတှဘေဲဖွဈဖွဈ အပြျောတမျးတောငျတကျအဖှဲ့တှဘေဲဖွဈဖွဈပေါ့.. လာမယျဆိုရငျဘာတှဆေောငျရနျရှောငျရနျတှလေိုအပျပါသလဲ ? ဘယျလတှမှောလာသငျ့သလဲဗြ ?
အဓိက ကမ်ြမာရေးကောငျးရမယျ ၊ တောငျတကျခွငျးလကျတှတှေ့ကေိုလကေ့ငျြ့သားပွညျ့ဝပွီးသားဖွဈနရေပါမယျ လိုအပျတဲ့အီကှမေ့ငျ့တှလေညျးစုံစုံလငျလငျပါရမယျ ၊ လမျးခရီးမှာဒသေခံတှပွေောပွတဲ့စညျးကမျးတှေ ၊ တားမွဈခကျြတှကေိုလိုကျနာရပါမယျ ၊ တောငျထိပျရောကျရငျ
တောငျထိပျမှာ အညဈကွေးတဈခုခု မွှုပျနှံ့ တာတှေ ရုပျထု မွုပျတာတှေ တောငျကို အောငျ နိုငျကွောငျး အောငျပှဲခံတာတို့
သီခငျြးဆို တာတှေ ကို ရှောငျရပါမယျ..,.
ဟု ရခေဲတောငျပေါငျးအလုံး (၁၀၀) ခနျ့တကျလာခဲ့ဖူးတဲ့အသကျ (၂၇) နှဈအရှယျ ဒသေခံရဝမျတိုငျးရငျးသား ဆနျလုရမျဆိနျးကအထကျပါအတိုငျးဖွကွေားသှာပါသညျ ။
Crd : စညျသူမောငျ
ကစ်ကစ်ကိုယ်တိုင်ပြောပြလာတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ရဲ့ လေးစားစရာစိတ်ထားတစ်ခု
အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် ဆိတ်ကျောင်းသမလေးကို တောတဲမှာ သားမယားကျင့်ရန် ကြိုးစားမှု
“အစိုးရမှ လျပ်စစ် ဓါတ်အား ၁၂ လ အတွင်း လုံလောက်ရန် စီမံပြီ 👏”
Line Walker2ပြီးရင် နောက်ထပ် နိုင်ငံ ၂ ခုနဲ့ တွဲရိုက်ဖို့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့...
ချစ်သူအသစ်နဲ့ ရန်ကုန်သွားမယ့် အတွဲကို ရည်စားဟောင်းအမျိုးသားက အတင်းပြန်လုမှု